iPhone , iPad ရဲ့ USB Restricted Mode ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
iPhone , iPad ရဲ့ USB Restricted Mode ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ?
Apple FEATURES HOW TO HUBS Mobile & Tablets Mobiles & Tablets Softwares & Application Softwares & Application
Apple က iOS 11.4.1 Update မှာ သင့်ရဲ့ ဒေတာများ လုံခြုံစေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုကို စတင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမည်မှာ USB Restricted Mode ဖြစ်ပြီး သူက User များရဲ့ ဒေတာများကို မသမာတဲ့ နည်းလမ်းများဖြင့် အခြားလူများ မရယူနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
USB Restricted Mode ဆိုတာ ဘာလဲ ?
USB Restricted Mode က သင့်ရဲ့ iPhone , iPad, iPod Touch များကို ၁ နာရီကြာ Lock လုပ်ပြီးနောက်မှာ USB Accssories များဖြင့် Lightning Port မှတစ်ဆင့် သင့်ရဲ့ ဒေတာများကို အခြားလူများ မရယူနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က အစိုးရ အာဏာပိုင်များ iOS Device များရဲ့ Passcode များကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ သုံးတဲ့ GrayKey လို Tools များကို ပိတ်ပင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် User များရဲ့ ဒေတာများကို ကာကွယ်ပေးမှာပါ။
ယခင်က iOS မှာ Passcode ကို အကြိမ်အနည်းငယ် မှားယွင်း ထည့်သွင်းမိရင် ဖုန်းကို Lock လုပ်လိုက်တဲ့ လုံခြုံရေး လုပ်ဆောင်ချက် ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ လုံခြုံရေး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ Tool များ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ USB Restricted Mode က ဒီလို လုပ်လို့ မရအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ USB Restricted Mode က ဖုန်းကို Lock လုပ်ထားပြီး ၁ နာရီ ကြာတဲ့ အခါမှာ Lightning Port ကနေ ဒေတာ ကူးယူခြင်းကို ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ အားပဲ သွင်းလို့ရတော့မှာပါ။ GrayKey လို Tool များက Passcode ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ နာရီ အနည်းငယ် ကြာတဲ့ အတွက် USB Restricted Mode က အဆင်ပြေပါတယ်။
USB Restricted Mode ကို Default အနေနဲ့ Enable လုပ်ထားပါတယ်။
iOS 11.4.1 ကို တင်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီ မုဒ်ကို Default အနေနဲ့ Enable လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့် အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပတ်ကို Unlock လုပ်ပြီးမှ USB Device များနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်မှာပါ။ ချိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ သင့် Device ဟာ Lock ဖြစ်သွားရင်တောင် ဒေတာ ဆက်သွယ်မှု ရှိနေဦးမှာပါ။
Accessories များဖြင့် အိုင်ဖုန်းကို အားသွင်းဖို့ Unlock အရင် လုပ်ရမှာပါ။
အိုင်ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ USB Accessory များကို ပိတ်ပင်ထားချိန်မှာ USB Power Adapter နဲ့ အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် USB Accessory နဲ့ အားသွင်းမယ်ဆိုရင် အိုင်ဖုန်းကို Unlock အရင်လုပ်ရမှာပါ။
USB Restricted Mode ကို ဘယ်လို ပိတ်မလဲ ?
Settings > Face ID (or Touch ID) & Passcode > USB Accessories ထဲသွားပြီး Disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Apple က USB Accessory များနဲ့ အိုင်ဖုန်းကို မကြာခဏ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူများအတွက်တော့ Disable လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Xiaomi က Black Shark Gamepad 2.0 ကို ကြေညာ
အိမ်သုံး ဘီယာချက်စက်ကို LG မိတ်ဆက်